China LEDD620620 Ceiling LED LED Dome Dome Fitaovana fitsaboana miaraka amin'ny mpanamboatra sy ny mpamatsy ny rindrina | Wanyu
LEDD620620 Ceiling LED LED Dome Dome Fitaovana fitsaboana miaraka amin'ny fanaraha-maso ny rindrina
Ny LEDD620 / 620 dia manondro ny valindrihana domes roa miorina amin'ny jiro fandidiana fitsaboana.
Vokatra vaovao, izay nohavaozina mifototra amin'ny vokatra voalohany. Akorandriaka alimo aluminium, nohavaozina ny firafitra anatiny, ny vokan'ny fanaparitahana hafanana tsara kokoa. Module jiro 7, totalim-bozaka 72, loko mavo sy fotsy roa, takamoa OSRAM avo lenta, mari-pana loko 3500-5000K azo ovaina, CRI avo kokoa noho ny 90, ny fahazavana dia mety hahatratra 150.000 Lux. Ny tontonana fandidiana dia ny efijery LCD touch, ny jiro, ny mari-pana amin'ny loko, ny CRI dia manondro ny fiovan'ny fifandraisana. Ireo sandry fampiatoana dia azo afindra mihetsika tsara ary apetraka tsara.
1. Fitaovana fampiatoana maivana
2. Fampisehoana afaka aloka
Ilay mitazona hazavana ara-pitsaboana arofenitra, famolavolana loharano hazavana marobe, hazavana fanamiana 360 degre amin'ny zavatra jerena, tsy misy matoatoa. Na dia sakanana aza ny ampahany aminy dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fandidiana ny famenon'ireo andry maro hafa.
3. Volana Osram ambony fampisehoana
Ny takamoa avo fampisehoana dia mampitombo ny fampitahana maranitra ny ra sy ny sela hafa ary ny taova ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ka mahatonga ny fahitan'ny dokotera ho mazava kokoa.
4. Fanovana miaraka
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko ny jiro miasa amin'ny fitsaboana dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
5. Rafitra fanamafisana orina
Fiarovana mahery vaika, rehefa mihoatra ny sanda voafetra ny herinaratra sy ny ankehitriny, dia hanapaka ny herinaratra ho azy ny rafitra hiantohana ny fiarovana ny fizaran-tany sy ny jiro LED hazavana be.
6. Safidy safidy maro
Ho an'ity hazavana miasa ara-pahasalamana ity dia misy amin'ny fifehezana rindrina, fanaraha-maso lavitra ary rafitra miverina amin'ny bateria.
Jiro miasa amin'ny LEDD620620
Previous: LEDD730740 Ceiling LED LED Head Head Medical Light amin'ny alàlan'ny tselatra avo
Manaraka: LEDD500 / 700 valindrihana LED hazavana fitsaboana roa loha miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
LEDD620 valindrihana LED tokana loha Medical hazavana w ...